‘विद्युत् बजार विस्तार गर्न सकिएन भने देशको अर्थतन्त्रसमेत दुर्घटनामा पर्न सक्छ’ - UrjaKhabar ‘विद्युत् बजार विस्तार गर्न सकिएन भने देशको अर्थतन्त्रसमेत दुर्घटनामा पर्न सक्छ’ - UrjaKhabar
‘विद्युत् बजार विस्तार गर्न सकिएन भने देशको अर्थतन्त्रसमेत दुर्घटनामा पर्न सक्छ’
काठमाडौं । देशको ऊर्जा क्षेत्र अहिले अलि फरक परिस्थितिबाट गुज्रेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको वर्षौं भइसक्यो । तर, नियमितरूपमा विद्युत् आपूर्ति हुँदैन । प्राविधिक, प्राकृतिक र भइपरि आउने घटनाले नियमित विद्युत् आपूर्तिमा व्यवधान खडा गरेको छ । यो आजको समस्या होइन, दशकौंदेखिको हो ।
सरकार तथा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको बागडोर समातेरको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणमा उति ध्यान दिएको देखिँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास भयो तर वितरण लाइन सुधारलाई गहनरूपमा लिइएन । यही कारण आज विद्युत् आपूर्ति अनियमित भइरहेको छ ।
उत्पादन बढ्दैछ तर खपत गर्ने वा प्रसारण गर्ने प्रसारण लाइन त्यही अनुसार निर्माण भइरहेका छैनन् । कोभिड–१९ को महामारीका कारण निजी जलविद्युत् व्यवसायीले ठूलो समस्या खेपिरहेका छन् । यसमा सरकारले चित्त बुझ्दो सहजीकरण गरेको पाइँदैन । अर्कोतर्फ, विद्युत् खपत गर्ने वा बेच्ने साँघुरो बजार छ । देशभित्रको बजार विस्तारमा सरकारको ध्यान छैन । भारत तथा तेस्रो मुलुकमा बेच्ने योजनाले खासै काम गर्ने देखिँदैन ।
आजको दिनमा प्रसारण, वितरण प्रणाली सुधार गर्दै बजार विस्तार गर्ने काम प्राधिकरणकै हो । तर, उसले यसतर्फ प्रभावकारी रूपले काम गरेको छैन । अझ यो बेला प्राधिकरणमा नेतृत्व छैन । निमित्तले काम चलाइएको छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारका आ–आफ्नै समस्या छन् । यही सेरोफेरोमा रहेर पछिल्लो समय जलविद्युत् व्यवसायमा समेत संलग्न ऊर्जाविद् डा. कृष्णप्रसाद दुलालसँग ऊर्जा खबरले गरेको कुराकानीको संक्षेप :
विद्युत् विकासको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
विद्युत् विकासको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको छ । देशका करिब ८७ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको हकमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू सबैबाट अहिले करिब १३ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । जुन हाम्रो अहिलेको माग पूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामै देखिन्छ ।
अहिले पनि दर्जनौं आयोजना निर्माणको क्रममा छन् र आगामी वर्षभित्र थप ३ हजार मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रवाट आउने देखिन्छ । प्रसारण तथा वितरणको हकमा पनि देशभर दर्जनाैं आयोजनाको काम जारी छ । यसबाट भोलिका दिनमा विभिन्न किसिमका ऊर्जामा बढन सक्ने मागलाई धान्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेखनीय भइसकेको छ । आउँदा वर्षमा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र एक भरपर्दो सहयोगीको भूमिकामा हुनेछ ।
हाम्रा आयोजना वा प्रणाली मौसमी (हिउँद र बर्खा) छन् । यो मौसमी प्रणाली, माग र आपूर्तिको दिगो समाधान कसरी हुन सक्ला ?
हो, अहिले हाम्रो प्रणालीको मुख्य चुनौती भनेको मौसमी माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन हो । यसको उचित व्यवस्थापन निकै जटिल देखिन्छ । अहिलेका लागि वर्षामा बढी हुने विद्युत् भारतसँग बैंकिङ वा भारतीय ऊर्जा बजारमा व्यापारमार्फत भारत पैठारी गर्ने र हिउँदमा अपूग विद्युत् भारतवाट आयत गरी पूर्ति गर्ने बाहेक हामीसँग अन्य विकल्प छैनन् ।
सरकारले गरेको कामको गतिले हामी विद्युत् विकासको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं त ?
विद्युत् विकासलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र माग व्यवस्थापन गरी ४ छुट्टाछुट्टै अङ्गको रूपमा हेर्नुपर्छ । उत्पादनको हकमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले घोषित लक्ष्यअनुसार नदेखिए पनि आन्तरिक माग धान्ने गरी विकास भएको छ । तर, अन्य क्षेत्रहरू प्रसारण, वितरण साथै माग व्यवस्थापनमा हामी लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि छौं । यो क्षेत्रमा अझ सरकारको कार्यक्षमता बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वयको दूरी सधैं टाढा हुने देखियो । यही अवस्था रहिरहे आगामी दिनमा निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा उत्साहित भएर आउला ?
सरकार र निजी क्षेत्र पनि अहिले केही नजिक भएको अवस्था मैले महसुस गरेको छु । विगत १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निजी क्षेत्रसँग सरकारले छलफल, वार्ता गरी उनीहरूका समस्या बुझ्ने प्रयास गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट विकास भई सञ्चालनमा आएका र रुग्ण भएका आयोजनाहरूको समस्या समाधान गर्न सबै सम्बन्धित निकायहरू सम्मिलित कमिटि बनाएर अध्ययन भइरहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता थप कमिटिमार्फत अझ निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या अध्ययन गर्ने र समाधान पहिल्याउने काम गर्न जरुरी छ । त्यसो हुन सके निजी क्षेत्र अवश्य पनि ऊर्जामा उत्साहित हुनेछ ।
कोभिड–१९ का कारण थलिएको निजी क्षेत्रका लागि सरकारबाट कस्तो सहयोग वा प्याकेजको खाँचो छ ?
कोभिड–१९ का कारण सबै क्षेत्रलाई असर गरेको अवस्थामा जलविद्युत् क्षेत्र पनि अछुतो रहेन । कोभिड–१९ को समस्या हेर्दा जलविद्युत्को क्षेत्रमा ३ किसीमले वर्गीकरण गर्नुपर्दछ जस्तै, अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूले फरक–फरक किसिमको असर भोगेका छन् । साथै, ३ वटै खालका आयोजनालाई फरक–फरक किसिमको राहत आवश्यक देखिन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई सबैभन्दा कम असर गरेको देखिन्छ । तथापि, मर्मत गर्न आवश्यक सामान तथा विज्ञहरूलाई समयमा ल्याउन नसकिएका कारण आयोजना प्रभावित भएका छन् । अध्ययनरत र निर्माणाधीन आयोजनालाई कोभिड–१९ ले निकै असर गर्यो । सबै खालका काम बन्द गर्ने अवस्था देखियो । यस्ता आयोजनालाई राहत दिँदा समय थप गरिदिने, राजस्व दस्तुर घटाउने, बैकको ब्याजमा केही सहुलियत दिने जस्ता सहयोगले सो काममा लागेकालाई राहत प्राप्त हुनेछ ।
विद्युत् क्षेत्रको अबको चुनौती उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा बजार कुन हो ?
विद्युत् क्षेत्रको अबको चुनौतीलाई क्रमैसँग भन्दा सर्वप्रथम बजार हो । त्यसपछि प्रसारण र वितरणलाई राख्नुपर्छ । आजको दिनकै ऊर्जा तथ्यांक हेर्दा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको न्यून क्षमताका कारण सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकी ऊर्जा खेर गएको अवस्था छ ।
साथै, प्रणालीमा ऊर्जा अपुग भएकोले आयत पनि गरिरहन परेको छ । आन्तरिक बजारको विस्तार तथा व्यवस्थापन नहुने हो भने यो असन्तुलन आगामी वर्षहरूमा अझै बढदै जानेछ । प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका चुनौतीलाई पनि कम आक्न मिल्दैन । कयौं सम्पन्न भएका आयोजनाहरू प्रसारणको अभावमा पूण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ, वितरण प्रणाली दुरुस्त नहुनाले हाम्रा घरमा आउने विद्युत्को गुणस्तरमा पनि समस्या देखिन्छ ।
प्रसारण तथा वितरणमा निजी क्षेत्र आउन सक्छ कि सक्दैन ?
प्रसारण तथा वितरणमा निजी क्षेत्र आउन सक्छ र ल्याउनु पनि पर्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । संसदमा विचाराधीन प्रस्तावित विद्युत् ऐनले सबै क्षेत्रहरू जस्तै उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार सबैमा प्रतिस्पर्धा गर्दै खुला गर्ने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण तथा वितरणमा ल्याउन प्रस्तावित विद्युत् ऐन छिट्टै पास गरी कार्यन्वयनमा जान जरुरी देखिन्छ ।
विद्युत् व्यापार गर्न कम्पनी समेत खोलेर अगाडि बढेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले अनुमति दिएन । अबका दिनमा निजी क्षेत्रको बिजुली किनेको रकम प्राधिकरणले तिर्न नसके के हुन्छ ?
प्रक्रियागत कुरा नमिलेर सरकारले अनुमति नदिएको होला तर प्रस्तावित विद्युत् ऐन पास हुने बित्तिकै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा आउने बाटो खुला हुने देखिन्छ । अहिले नै निजी क्षेत्रको बिजुली बापतको रकम तिर्न नसकिने अवस्था आउदैन् । निर्माणाधिन प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजना सम्पन्न हुनासाथ निजी क्षेत्रको विद्युत् सम्पुर्ण रूपमा सदुपयोग हुनेछ ।
नेपालको विद्युत् भारत वा तेस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने कुरा सजिलो हैन । सरकारले नेपालको प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न ऊर्जा बैङ्गिक प्रस्ताव गरे पनि भारतीय अनिच्छाका कारण सम्भव देखिएको छैन ।
सरकारले बढी भएको बिजुली भारत वा तेस्रो बजार (बंगलादेश) बेच्ने भन्दै आएको छ । यो यति सजिलो छ ?
पक्कै पनि नेपालको विद्युत् भारत वा तेस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने कुरा सजिलो हैन । सरकारले नेपालको प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न ऊर्जा बैङ्गिक प्रस्ताव गरे पनि भारतीय अनिच्छाका कारण सम्भव देखिएको छैन । पहिले नेपालको विद्युत् भारत सम्भव भएमात्र बङ्गलादेशसम्मको व्यापार कल्पना गर्न सकिएला । अहिले यो विषय निकै दूर क्षितिजमा रहेको आभास हुन्छ ।
विद्युत् बजार विकासमा अहिलेसम्म सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) ले गरेका काम वा गतिविधिमा ढुक्क हुन सकिन्छ ?
विद्युत् बजारको विकास भन्नाले भारतीय बजार मात्र बुझ्ने काम भयो जुन एकदमै गलत छ । बजारलाई आन्तरिक रूपमा खपत र व्यवस्थापन संग जोडेर हेर्यो भने यसवाट उर्जा व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ । अहिले नेपाल भारतबीच करिब १२०० मेगावाट विद्युत् आदान प्रदानका लागी संरचना तयार भएको अवस्था छ तर उर्जा व्यापार गर्नका निम्ति चाहिने अन्य संयन्त्रहरू अझै तयार भएको छैन । तयारीको गति निकै सुस्त रूपमा अघि बढि रहेको छ।
हाम्रो वितरण प्रणाली ज्यादै कमजोर छ । यही कारण दिनहुँ बिजुली काटिने समस्या दोहोरिइरहन्छ । यसको दिगो समाधान के हो ?
हाम्रो वितरण प्रणाली निकै कमजोर रहेको कुरा सत्य हो । यसलाई सबलीकरण र नियमित मर्मत सभारबाट नै प्रणालीलाइ दुरुस्त राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अहिले पनि वितरण प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौं आयोजनाहरू अघि बढिरहेका छन् । यी आयोजनालाई छिटो र गुणस्तरीय निर्माणसहित सम्पन्न गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, वितरण प्रणालीको माग व्यवस्थापन गर्न वितरण ट्रान्सफरमरहरू थप गर्न अति आवश्यक छ । यसका लागि आगमी १० वर्षमा बृद्धि हुने माग धान्ने गरी थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले नयाँ विद्युत् ऐनबाट कम्पनी टुक्रयाउने भनिसकेको छ । प्राधिकरणको अस्तित्व नै के हुने भन्ने अन्योल छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत् क्षेत्रमा हासिल गर्ने भनिएका लक्षित उपलब्धिको लेखाजोखा कसरी गर्नुहुन्छ ?
विद्युत् ऐनले प्राधिकरण टुक्रयाउने भनिएको होला तर यथार्थमा प्राधिकरण निकै अघि देखिनै त्यसभित्र रहेका विभिन्न व्यवसायलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमसहित काम गरेको अवस्था छ । जस्तै, उत्पादनमा प्राधिकरणको हिस्सा निकै तल गइसकेको छ । विद्यत् उत्पादनमा अहिले निजी क्षेत्र तथा अन्य कम्पनीहरूको जम्मा हिस्सा प्राधिकरणभन्दा बढी भइसकको अवस्था छ । प्रसारणको हकमा पनि सरकारले प्रसारण कम्पनी बनाएर ठूलो प्रसारण लाइन सम्बन्धी कार्य सोही कम्पनीमार्फत सुरु गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा प्राधिकरणसँग अब वितरणमात्र बाँकी रहेको देखिन्छ र वितरण पनि छिटै संघीय संरचना अनुसार पुनर्सरचना गर्न आवशयक देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणमा प्राधिकरणको खण्डिकरण आवश्यक छ कि छैन वा यसको पुनर्संरचना कसरी गर्न सकिन्छ ?
सर्वप्रथम प्रधिकरणको खण्डिकरण देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा संघीयताको भावना सुहाउने गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्रलाई त्यही प्रदेशको कानुनअनुसार दर्ता गराई व्यवसाय गर्ने तथा सम्बन्धित प्रदेशमै कर तिर्ने व्यवस्था सहित परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अन्य व्यवसायको हकमा सम्बन्धित प्रदेशमा कम्पनी दर्ता गरी उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको लागि आगामी दिनमा विद्युत्को खरिद बिक्री प्रस्तावित विद्युत् ऐनअनुसार व्यापार कम्पनी मार्फत हुने व्यवस्था रहेकोले प्राधिकरण खण्डिकरणले कुनै असर पर्ने देखिँदैन ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले आर्जन गरेको नाफा, घटाएको चुहावट जस्ता विषयमा प्रश्न उठेको छ । यहाँ ऊर्जाविद् पनि भएकाले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
प्राधिकरणले गरेको नाफाको विषयमा धेरै कोणबाट टिप्पणी सुनिएको देखिन्छ । यहाँ स्मरणयोग्य कुरा के छ भने २०% विद्युत् मूल्य समायोजन भएको, बाढी तथा पहिरोले भोटेकोसी (४५ मेगावाटको) आयोजना बन्द रहेकोले भुक्तानी गर्नुनपरेको, प्राधिकरणको व्यवसायको हिस्सा बढेको लगायत पक्षले प्राधिकरणको नाफामा सकारात्माक प्रभाव परेको देखिन्छ । साथै, प्राधिकरणको अघिल्लो व्यवस्थापनले केही चुवावट कम गर्न सफल भएको अवस्थाले पनि थप नाफा बढन सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
केही विश्लेषकहरू प्राधिकरणले उठ्न नसकेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको १०/१२ अर्ब रुपैयाँ महसुल जोडेर नाफा देखाएको भन्छन् । यो सत्य हो ?
विद्युत् प्राधिकरणको २०७७ भदौ १ गते जारी वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको वासलातमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत विवाद भई उठ्न नसकेको ठूलो रकम बाकी नै रहेको देखिन्छ । तर, चरम विवादित सो विषयबाट उठनुपर्ने रकम उठ्ने/नउठने टुंगो छैन । त्यसैले, वास्तवमा भएको नाफा कागजी हो वा यर्थाथ हो त्यो समयले नै बताउनेछ ।
प्राधिकरणले जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई सौताको व्यवहार गर्यो भनिन्छ । फेरि निजी क्षेत्रका व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक तथा उच्च अधिकारीलाई चाकडी गर्न पुग्छन् । यस्तो किन हुन्छ ?
प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबीच केही समस्या भए पनि यसलाई सौताको व्यवहार भन्न अलिक मिल्दैन होला । सँगै यात्रा गरिसकेपछि कहिले काही खुटटा ठोकिने अवस्था आउनुलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ । त्यस्तै, निजी उत्पादनकर्ता चाप्लुसी गर्न पुगेका जस्ता समाचारहरू पनि हाम्रा जस्ता मूलुकका लागि सामान्य रूपमै लिन सकिन्छ । क्षणिक र व्यक्तिगत नाफाका लागि यस्ता घटना हुनुलाई कुनै नौलो मान्न जरुरी छैन ।
सरकार (मन्त्रालय), प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच धेरै नै मतभिन्नता छन् । यसमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुन सकेन भने विद्युत् विकासको गति पुरातन नै हुन्छ । अब प्राधिकरणले कसरी काम गर्नुपर्छ ?
प्राधिकरणको अघिल्लो नेतृत्व अवस्था नै त्यही हो । लोडसेडिड समाप्त गरी वाहवाही बटुलेको प्राधिकरण व्यवस्थापन सरकारसँगको समन्वयमा त्यति सफल देखिएन । जसले गर्दा लामो समयदेखि रुग्ण भएका प्रसारण तथा वितरण लाइनका कामहरू योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकेन । प्राधिकरणले हरबखत सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्ने हो भने प्राधिकरणका अनेकौं कामबिना रोकावट अगाडि बढाउन सम्भव नै छैन । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्र अब हाम्रो प्रणालीमा १–३ भन्दा ठूलो हिस्सेदार भइसकेपछि उसलाइै सँगै एउटै परिवारको सदस्य भइ हिँडाउन जरुरी देखिन्छ । यो दुवैतर्फ समन्वयका लागि प्राधिकरणभित्र एक उच्चस्तरको स्टेयरिङ कमिटि गठन गरी काम अगाडि बढाउन सके अवश्य राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ ।